MSI Creator Center ကို Pro ကျကျ ဘယ်လို အသုံးပြုမလဲ
ဒီတစ်ခါ ဖော်ပြချင်တဲ့ ဆောင်းပါးလေးကတော့ MSI Prestige ၊ Creator နဲ့ WorkStation Laptop တွေအတွက် ထုတ်ပေးထားတဲ့ Essential Application အကြောင်းပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ အခေါက်တုန်းက MSI Gaming Laptop တွေအတွက် Dragon Center အကြောင်း ဂယနဏ ဖော်ပြပြီးသွားပါပြီ။ ဆောင်းပါးအကြောင်း လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီ Link ကနေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ဒီတော့ MSI ကနေ Gaming နဲ့ Creator ဆိုပြီး ခွဲထုတ်ထားသလို သူတို့အတွက် ပါဝင်လာတဲ့ Application က ရော ဘယ်လောက်ထိ စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်လဲ?
အရိုးရှင်းဆုံး ပြောရင်တော့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် အစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ပြိုင်ကားတစ်စင်းကို Control လုပ်မယ့် စနစ် ကောင်းကောင်း လိုပါတယ်။
ဒီဥပမာကို Dragon Center မှာတုန်းက ပြောခဲ့ဖူးသလို အခု ဆွေးနွေးသွားမယ့် Creator Center မှာရော သုံးစွဲသူတွေ ဘာအကျိုး ရနိုင်မလဲ လေ့လာကြည်တာပေါ့။
The Creator Center
Dragon Army နဲ့ အသွင်မတူတဲ့ အဖြူရောင် Essence နဲ့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီး Creator Mode ၊ System Monitoring ၊ System Tuner ၊ Battery Master နဲ့ Tools & Help ဆိုပြီး Main Tab ၅ မျိုးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။
ဒီ Essential Tab တွေ မပါပဲနဲ့ရော သုံးလို့မရဘူးလား? ရပါတယ် ဒါမယ့် Perfect Workload ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျနော် ပြောတဲ့ ဥပမာလိုပဲ Dragon/Creator Center တို့ဟာ ကွန်ပျူတာ အစိတ်ပိုင်းတွေကို အချိုးတကျ မျှဝေသုံးစွဲဖို့ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်ရာ Game ၊ Content တွေအလိုက် Software ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့မှုတွေ ပါဝင်လို့ပါ။
Creator Mode (Image: MSI)
ဥပမာ လက်တော့ အပူလွန်ကဲတာမျိုး၊ ထင်သလောက် အလုပ်မသွက်တာမျိုး၊ ဘက်ထရီ အားမနေတဲ့ ဖြစ်နေကျ ပြဿနာမျိုးတွေအတွက် Center ၂ မျိုးလုံးက ကောင်းစွာ အကျိုးပြုပါတယ်။
ကျနော့်အနေနဲ့ Favourite အဖြစ်ဆုံး Feature လို့ ပြောချင်သလို Dragon Center ရဲ့ Game Mode လို သုံးစွဲသူ အလိုကျ Audio ၊ Colour ၊ Photo ၊ Power Director App တွေနဲ့ Adobe AI လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးထားပါတယ်။
ဒါကိုတော့ ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ App အလိုက် Creator Mode က ထောက်ပံ့နိုင်အောင် Select လုပ်ထားရမှာဖြစ်ပြီး Advance Option အနေနဲ့ ညာဖက်ထောင့်မှာ Setting တစ်ခု ထည့်ပေးထားပါတယ်။
ဒီကတဆင့် CPU နဲ့ GPU Function တွေဘက် ဆက်သွားနိုင်မှာဖြစ်ပြီး Thread Affinity ကို Single ၊ Dual သို့မဟုတ် Multi-core သုံးမလား ထပ်ရွေးနိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယ တဆင့်မှာတော့ RAM နဲ့ GPU နှစ်မျိုးကို အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည် ပေးနိုင်အောင် Optimize လုပ်ထားဖို့ လိုပါမယ်။
GPU ကတော့ သိတဲ့အတိုင်း Creator Class မှာ အရေးပါဆုံးလို့ ပြောနိုင်သလို RAM ကိုကျ မလိုအပ်တဲ့ App တွေ Run မနေအောင် တနည်း App အတွက်လိုအပ်တဲ့ Cache Size ဖယ်ပေးနိုင်အောင် နေရာလွတ် ချန်ထားစေတဲ့ သဘောမလို့ပါ။
အခုလို Creator Mode ကနေ ကန့်သတ်လိုက်တဲ့ Specified စွမ်းဆောင်ရည် ဘယ်လိုရှိနေမလဲဆိုတာကို System Monitoring Tab ကနေ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
သိတဲ့အတိုင်း Creator App တွေက ဂိမ်းတွေလို Power Hungry ဖြစ်ကျတာဆိုတော့ CPU နဲ့ GPU ကို ဘယ်လောက်ထိ စားနေလဲ? RAM Usage ဘယ်လောက်ရှိနေမလဲ သိနိုင်သလို စက်တစ်ခုလုံးအတွက် တာဝန်ယူထားရတဲ့ System Fan တွေ ဘယ်လောက် Speed နဲ့ လည်နေသလဲကအစ သိနိုင်မှာပါ။
တနည်းဆိုရသော် App တစ်ခုခု သို့မဟုတ် လိုအပ်တာထက် ပါဝါစားနေရင် CPU နဲ့ GPU များလာတတ်သလို ပန်ကာတွေလည်း ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်သွားတတ်တဲ့အတွက် သာမန်ထက် ဆူညံစွာ လည်နေမှာပါ။
Monitoring (Image: MSI)
အဲ့ခါကျရင် Problem ဖြစ်နေတဲ့ App ကို Task Manager ကနေ လေ့လာနိုင်ပြီး အကယ်၍ Creator App ကြောင့်ဆိုရင် Creator Mode မှာ တချက် ပြန် Adjust လုပ်ကြည့်ပါ။
ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်တာ အပေါ်ညာဖက်ထောင့်က Power Profile ကို နှိပ်ပြီး CPU ၊ GPU ၊ System RAM နဲ့ Fan Speed အပြင် တခြား Hardware Info တွေကို Mini Windows အနေနဲ့ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အကယ်လို့ App Demand က သာမန်ဖြစ်နေပြီး System က ဝန်ပိနေတယ်ဆိုရင် System Turner အကူညီ တောင်းရပါလိမ့်မယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ခါတရံ Laptop ကို ကျွေးထားတဲ့ Power Profile က မလုံလောက်တာ ဖြစ်နိုင်သလို Cooling မနိုင်တာလည်း ဖြစ်တတ်လို့ပါ။ အများအားဖြင့် Balanced Profile နဲ့ Default အတိုင်း သုံးတတ်ပေမယ့် နည်းနည်းလေး Pro ဆန်သွားချင်ရင် Custom Profile နဲ့ သုံးကြည့်ပါ။
High Performance ၊ Balanced ၊ Silent နဲ့ Battery Master Tab တွေ ရွေးသုံးတာထက် Custom Profile နဲ့ သုံးတာ ပိုကောင်းလို့ပါ။
ဒိအတွက် Creator Mode မှာ App တွေကို ကိုယ်စိတ်ကြိုက် Optimize ဖြစ်အောင် လုပ်ဖို့လိုတာလည်း မမေ့ပါနဲ့၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Power Profile ပြောင်းတဲ့အခါ ဝုန်းဆို ခုန်ချ၊ ခုန်တက်တာမျိုး မဟုတ်တဲ့အတွက် ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေဆုံး Profile Setup လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံး လေ့လာပါ။
System Turner (Image: MSI)
ဥပမာ Power Director နဲ့ Edit ကိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာ CPU နဲ့ GPU ကို ဘယ်လောက်ထိ သုံးစွဲနေသလဲ? အများအားဖြင့် Hardware ကနိုင်ရင် နိုင်သလောက် App တွေ သုံးတဲ့အခါ အပူက ဒုတိယ ပြဿနာအဖြစ် လိုက်လာမှာပါ။
ကိုယ့်အနေနဲ့ Performance လျှော့လိုက်ပြန်ရင် အချိန်ပိုကြာသွားနိုင်သလို Fan Speed ကို Advance Mode နဲ့ Target ဘယ်လောက် rpm မှာ အပူချိန် ထိန်းထားနိုင်သလဲ? Prestige တွေအတွက် 85°C မကျော်ရင် ကောင်းတယ်လို့ ပြောနိုင်သလို Creator နဲ့ Workstation တွေကျ 70°C ဝန်းကျင် ရှိနေရင် CPU ကောင်းကောင်း Turbo Frequency ထိန်းပေးနိုင်ပါတယ်။
4 Power Shift Modes
ဘာလို့လဲဆိုတော့ Frequency များများနဲ့ အလုပ်လုပ်မှ Rendering Time နည်းမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် Choke Point မရောက်ပါစေနဲ့။ CP ဆိုတာ CPU တစ်လုံး Throttle ဖြစ်ပြီး Turbo Frequency မထိန်းနိုင်တဲ့ အခြေနေမျိုး ရောက်သွားစေတဲ့ Temperature လို့ ပြောကြပါတယ်။
ဒီတော့ သုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ Performance Shift မှာ Turbo ၊ Sport ၊ Comfort နဲ့ Eco တွေ ပါလင့်ကစား ကိုယ်အသုံးပြုလိုတဲ့ App အလိုက် Power Profile ကို ရွေးချယ်ပါ။
အမြဲတစေ High ဖြစ်နေရမယ် မဆိုသလို ပါဝါအစားနည်းတဲ့ App မျိုးအတွက်ကျ Balanced က သင့်တော်ပါတယ်။ နောက်နှစ်မျိုးတွေက ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွယ်မှာ နေထိုင်ရသလို ညဖက် Edit ကိုင်တဲ့အခါ ပန်ကာသံ တညံညံ ဖြစ်မနေစေဖို့ ထည့်ပေးထားတဲ့ Power Mode ပါ။
Turner (Image: MSI)
အထူးသဖြင့် Silent က CPU နဲ့ GPU ကို Frequency နည်းနည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်အောင် Throttle လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ပါဝါအစားနည်းသွားသလို ဖုန်စုပ်စက်လို အော်နေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
ခုလို Main Power Tab Fan Control ကို Auto ၊ Basic ၊ Advanced နဲ့ Cooler Boost ဆိုပြီး Option ၄ မျိုး ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်။
Auto Mode ကို Best Suited လို့ ပြောနိုင်သလို ပါဝါစားများရင် များသလို အပူတက်လာတဲ့ CPU နဲ့ GPU ကို လိုအပ်တဲ့ Fan Speed နဲ့ ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမယ့် Idle State လို မလိုတဲ့အချိန်ကျ ပန်ကာပိတ်မနေဘဲ အနိမ့်ဆုံး Frequency နဲ့ လည်နေတတ်လို့ Advance Mode နဲ့ သုံးစေချင်ပါတယ်။
Advance Tab မှာ Room Temperature လို 35°C ~ 45°C Range အတွက် ပန်ကာမလည်ခိုင်းလည်း ရပါတယ်။ App တွေသုံးရင်း အပူတက်လာမှ 50% ၊ 60% နဲ့ 70% အထက် လည်စေနိုင်သလို Heavy Loading လို အခြေနေမျိုးအတွက် Fan Speed ဘယ်လောက် လိုမလဲ သုံးစွဲသူတွေ လေ့လာဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အထူးသဖြင့် Rendering လုပ်တဲ့အခါနဲ့ Edit ကိုင်တဲ့အခါ အပူ အမြဲရှိနေတတ်တဲ့အတွက် အရင်ဦးဆုံး အမြင့်ဆုံး လည်နေမယ့် Fan Speed ကို လေ့လာပါ။ ဆိုကြပါစို့ 5,500 rpm (Cooler Boost Speed) ဝန်းကျင်ရှိနေရင် Power Load များတယ်လို့ ယူဆနိုင်သလို အဲ့သလို အသုံးပြုရမယ့် အခြေနေမျိုးတွက် Silent ၊ Battery Option ရွေးပြီး မခိုင်းမိပါစေနဲ့။
Profile တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်တာနဲ့ ပြီးသွားမယ်ဆိုမယ့် System က ချက်ချင်းလိုက်ပြောင်းမှာ မဟုတ်တဲ့အတွက် လိုအပ်တဲ့ Profile ရွေးထားပြီးရင် Fan Control ကို Default အတိုင်းမထားတော့ဘဲ
0% ၊ 70% ၊ 80% ၊ 90% သို့မဟုတ် 80% ၊ 90% ၊ 110% စသဖြင့် မြင့်ပေးလိုက်ပါ။
အဲ့လို မြင့်ရတဲ့အကြောင်းပြချက်က အပူချိန်နည်းလေ Turbo လုပ်နိုင်လေ ဆိုတဲ့ CPU သဘောတရား အကျုံးဝင်တာမို့ 50°C ~ 65°C Range အတွင်းရှိမယ့် အပူချိန် သို့မဟုတ် ပန်ကာ Speed ကို တတ်နိုင်သမျှ မြင့်ပေးထားလိုက်တာက စွမ်းဆောင်ရည်ကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
ခုလို Performance တက်လာပေမယ့် ဖုန်စုပ်စက်လို ကျယ်လောင်နေမယ့် ပန်ကာသံကိုတော့ အပြစ်မတင်နဲ့ပေါ့။ Desktop တစ်လုံးနီးပါး တာဝန်ယူထားရတဲ့အတွက် သည်လောက်တော့ သည်းခံရမှာဆိုပြီး စက်ကို ညာတာစွာ ခိုင်းစေချင်ပါတယ်။
Edit လုပ်ပြီးသွားလို့ အလုပ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီး စက်ကို ဝုန်းကနဲ Shutdown ၊ Sleep မလုပ်ပစ်ပါနဲ့ Component တွေ အေးမြသွားတဲ့အထိ Cool Down လုပ်ပြီးမှ ပိတ်လိုက်ပါ
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောချင်တာက Battery Master ပါ။ Dragon Center မှာရော 100% ၊ 80% နဲ့ 60% Option ၃ မျိုးထည့်ထားပြီး အကယ်၍ Ever Plug ထိုးသုံးရသူဆိုရင် 60% က အသင့်တော်ဆုံး အနေထားပါ။ ဒီအခြေနေမျိုးအတွက် Battery တပ်မထားရင်တောင် ပိုမိုက်ပါတယ် (နောက်တာပါ)
Battery (Image: MSI)
အခုလို Option ၃ မျိုး ထည့်ပေးတာက Battery သက်တမ်း တာရှည်ခံဖို့ ရည်ရွယ်တာ ဖြစ်ပြီး Throttle လုပ်ထားတဲ့ Option အလိုက် System ကလည်း ပါဝါသုံးစွဲမှုကို ခွဲဝေနိုင်တာမလို့ပါ။
Creator Center နောက်ဆုံးထွက် Version က ကျွန်တော် အခုရှင်းပြနေတဲ့ Version နဲ့ UI ပိုင်းနဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်း ပိုလှလာမယ်ဆိုပေမယ့် အခြေခံ အကျဆုံး အချက်တွေက အတူတူပါ
Creator Center Global Homepage
Qualcomm ကို ကျော်တက်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး Semiconductor ထုတ်လုပ်သူ ဖြစ်လာတဲ့ HUAWEI